Enduro MTB စက်ဘီးစီးခြင်း - ULLER တွင်စတင်ရန်သိကောင်းစရာများ
သင်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ဘာကိုကျွမ်းကျင်ရမည်နည်း စက်ဘီး စိုးရိမ်ပူပန်သည်, ဤဆောင်းပါးသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။
မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းကျော်ကြားမှုအများဆုံးရရှိခဲ့သည့်အားကစားတစ်ခုမှာစက်ဘီးစီးခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အိမ်ပြင်တွင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ချက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လူအများမသိသောအရာမှာဤအလေ့အကျင့်တွင်လမ်းပေါ်မှစက်ဘီးစီးခြင်း၊ Tour de France သို့မဟုတ် Giro d'Italia၊ BMX သို့မဟုတ်တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးခြင်းစသည့်ပြိုင်ပွဲများကိုလူသိများသောကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများရှိသည်။ အဲဒီထဲမှာ XC (cross country)၊ Trail (သို့) the ကဲ့သို့သောအခြားသူများလည်းရှိတယ် Enduro MBTဤနေရာတွင်မည်သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပြီး၊ ဤအမျိုးအစားတွင်စတင်ရန်နှင့်မသေဆုံးရန်သင်သော့အချို့ပေးသည်။
သင်ကြိုက်တာ adrenaline ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကမင်းရဲ့အားကစားပဲ။ The Enduro စက်ဘီးစီး MBT ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စု၏ကျေးဇူးကြောင့်တောင်ပေါ်သို့မည်သူလျင်မြန်စွာဆင်းသွားသည်ကိုကြည့်ရှုရန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာအတူတူပဲ၊ ဒါပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်။ တကယ်တော့ဒါကလာတာမတိုက်ဆိုင်ဘူး တည်မြဲခြင်း အင်္ဂလိပ်စာမှာခံနိုင်ရည်ကိုဆိုလိုတယ်၊ ဒီအားကစားဟာမြေပြင်အနေအထားပေါ်ကစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲကိုအခြေခံတယ် တောင်တစ်လုံးလုံး နှင့်အဘယ်သူ၏လမ်းကြောင်းနှစ်ခုနှင့်မိနစ်2အကြားကြာရှည်နိုင်အဆင့်ဆင့်သို့ခွဲခြားထားတယ်, စုစုပေါင်းပြိုင်ဆိုင်မှု 20 မှ 10 ကီလိုမီတာအကြားအထိနိုင်ပါတယ်။ ဤပုံစံသည်အဓိကအားဖြင့်ကုန်းဆင်းခြင်းကိုခံစားခြင်း၊ ကုန်းဆင်းစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်တူညီသောအချက်ရှိခြင်းအပေါ်အဓိကအခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်များစွာသောဆင်းသက်သူများသည်တက်ခြင်းနှင့်တူညီသောအကွာအဝေးရှိသည်။
အတွက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့အခါမှာ အန်ဒူရို ၎င်းတို့ကိုမှတ်သားထားရမည့်အချက်မှာ၎င်းတို့သည်အချိန်ကာလကိုကြိုတင်သိထားသည့်အချိန်ကုန်ဆုံးပြိုင်ပွဲများ (ဆင်းသက်မှုများသာ) ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်တစ်ပတ်မတိုင်မီကမြေပြင်အနေအထားကိုသာပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သင်အံ့အားသင့်မည်ဆိုလျှင် သင်မသိသောအပိုင်းအချို့တွင်သင့်ကိုဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။
သင်သိသင့်သည်ပထမအချက်မှာ enduro သည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ၊ တောင်တက်စက်ဘီးတစ်စီးကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ဗဟုသုတရှိခြင်းနှင့်ယခင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ မျိုးနွယ်စုအတွင်းရှိအထက်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကြီးမားသောကြွက်သား ၀ တ်ဆင်မှုများအပြင်လူမျိုးများကိုသယ်ဆောင်ရန်ခုခံမှုသည်အဓိကကျသည်။
Enduro လမ်းကြောင်းများသည်ရှည်လျားပြီးသင်စက်ဘီးစီးရန်နာရီပေါင်းများစွာကုန်လိမ့်မည်ကိုသတိရပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရန်လမ်းကြောင်းများရှည်လျားစွာသွားခြင်းဖြင့်သင်၏အေရိုးဗစ်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်အားကစားရုံများတွင်လေ့ကျင့်နိုင်ပြီးသင်၏ခွန်အားကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ သင်၏စက်ဘီးကိုအောင်မြင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းနှင့်ခြေထောက်များလိုအပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သတိနဲ့လုပ်ပါ။
တစ် ဦး ကတောင်ကြီးတောင်ငယ်ဆိုင်ကယ်, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့် enduro များအတွက်!
၏ဂျီသြမေတြီ MTB enduro စက်ဘီးစီး ဒါကအများကြီးပိုပြီးရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်မြေအနေအထားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုရှည်လျားခြင်းနှင့်၎င်းသည်လုံလောက်သောတည်ငြိမ်မှုရရှိရန်အခြေခံသည်၊ အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတွင်တောင်ပေါ်သို့သွားသောအခါအဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာခုန်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤစက်ဘီးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌အမှားအယွင်းပိုများကြောင်းနှင့်လူကြိုက်များသောဆုံဆုံဆုံနေရာအဖြစ်လူသိများသောအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏အလေးချိန်ကိုပြန်လည်ခွဲဝေရန်နှင့်တတ်နိုင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုသင်သိသင့်သည်။ တက်နှင့်ဆင်းအတွက်သင့်လျော်သောအဖြစ်ကုန်းနှီး၏အမြင့်ကိုထိန်းညှိရန်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤ mode တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသောနင်းသည်ပုံမှန်ခြေနင်းဖြစ်သည်ကိုသင်သိသင့်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ခြေထောက်ကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှား။ ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင်မြေပေါ်တွင်ထောက်ပံနိုင်သည်။
မင်းရဖို့ enduro စက်ဘီးအကောင်းဆုံးကတော့သင်အထူးဂရုစိုက်သည့်အထူးဆိုင်များသို့သွားပြီးသင်ရှာဖွေနေသောအရာသည်သူတို့အတိအကျသိကြသည်။ အကယ်၍ ဤသည်မှာသင့်အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လျှင်စတိုးဆိုင်ကြီးများတွင်ရှာတွေ့နိုင်သောစျေးပေါသောစျေးနှုန်းများကြောင့်သင့်ကိုအကြံပေးခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအကြံပေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
MBT သံခမောက်လုံး၊ အရာရာတိုင်း၏သော့ဖြစ်သည်
သင့်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဝယ်ယူသကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပေမယ့် enduro စက်ဘီးရွေးချယ်ရန်သင်လည်းသိရန်အရေးကြီးသည် enduro သံခမောက်လုံး မှန်ပါတယ် သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုကာကွယ်ခြင်းသည် ဦး စားပေးသင့်ကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ပင်၊ အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာပြစ်တင်ရှုတ်ချနိုင်သောစျေးပေါသောသံခမောက်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အလို့ငှာ enduro၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်လေ ၀ င်လေထွက်နည်းသောကြောင့် ပို၍ လေးလံသောကြောင့် ပို၍ လေးလံသောကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုလို A ပ်ပါက၎င်းတို့သည် A ဓိကဖြစ်သင့်သည်။
အချို့ရှိ enduro မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့်မျက်လုံးများကိုကောင်းစွာဖုံးအုပ်။ သံခမောက်နှင့်တူသည် MTB စက်ဘီးစီး တောင်တန်းဒေသများ၊ တောင်စောင်းများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရေတံခွန်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ Uller မှကျွန်ုပ်တို့၏အားကစားမျက်မှန်များကိုအကြံပြုသည်။ The Wall အနီရောင် / အနက်ရောင် ။ ဒီမျက်မှန်အမျိုးအစားတွင်ရှိသည် စလစ်သုတ်ကြိုး ဒါကမင်းရဲ့မျက်မှန်ကိုသံခမောက်နဲ့အမြဲချိတ်ထားပေးတယ်။
အပေါ် enduro အဝတ်အစားအမြဲတမ်းအားကစားကိုလုပ်ဖို့သွားမယ်ဆိုတာကိုအမြဲသတိရပါ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဝါဂွမ်းအင်္ကျီများကိုမမေ့ပါနှင့်၊ အသက်ရှူမြန်မြန်ခြောက်သွေ့စေသောအဝတ်များဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့သင်ထွက်မသွားမီလမ်းကြောင်းကိုသိသောကြောင့်သင်လိုအပ်သောအဝတ်အစားများကို ပို၍ ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ဟာဆောင်းရာသီထက်နွေရာသီတွင်ခြေနင်းသွားခြင်းနှင့်မတူပါ။ သို့မဟုတ်ကျောက်တုံးများဖြင့်ပြည့်နေသောကြောင့်ဘောင်းဘီ၏အထူသည်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းလေဝင်လေထွက်ကိုအမြဲအာမခံပါသည်။
ခြေနင်းသွားထွက်သည့်အခါသတိထားပါ၊ အခြားစက်ဘီးစီးသူများသွားလာကြသည့်တစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလမ်းများနှင့်လမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက်လိုက်ပါသွားခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ အကယ်၍ သင်ဟာအတွေ့အကြုံမရှိသေးလျှင်သင်ပြိုလဲခြင်းနှင့်သင်လိုအပ်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကူအညီ, ဤလမ်းကြောင်းအမျိုးအစားများအတွက်သင်သွားနိုင်သည်ထက် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်ထက်အတွေ့အကြုံရှိသောအခြားသူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည်သင်၏နည်းစနစ်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်၎င်းတို့ထံမှအကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာများကိုကူးယူရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
သိသာထင်ရှားသော်လည်းလူအများက၎င်းတို့ကိုအန္တရာယ်မပြုနိုင်သောကြောင့်မပြုလုပ်ကြပါ။ သင်တက်ရန်အတွက်ပြုလုပ်ထားသောလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူတက်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်မည်သည့်ကြောက်စိတ်ကိုမဆိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးသင်၏ချန်ပီယံများအတွက်ပိုမိုလေ့ကျင့်ပါလိမ့်မည်။
ကောင်းစွာစား: မီ, ကာလအတွင်းနှင့်ပြီးနောက်!
အစားအစာနှင့်သောက်သုံးရေသည်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်၏လမ်းကြောင်းကိုသင်အလွန်အာရုံစိုက်ထားသော်လည်းသင်ရေဓါတ်ကိုထိန်းထားရန်လိုအပ်သည်၊ အရည်ကိုယူခြင်းသည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာသင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုမည်သည့်ပြproblemနာမှမရှိဘဲအောင်မြင်နိုင်သည်။ အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စွမ်းအင်အရက်ဆိုင်နှင့်အသီးအချို့ကဲ့သို့သောမုန့်များကို စား၍ နည်းနည်းပိုယူနိုင်သည်။ ပရိုတိန်းနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုစားသုံးခြင်းသည်သင်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုရင်ဆိုင်ရာတွင်ကွဲပြားမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
သင်သည်အားကစားလေ့ကျင့်နေကြောင်းနှင့်အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာသင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနေကြောင်းမမေ့ပါနှင့်။ အလွန်အပြိုင်အဆိုင်များမနေပါနှင့်၊ အခြားပြိုင်ဘက်များမပါ ၀ င်ပါကသူတစ်ပါးကိုသင့်အားဖြတ်သန်းသွားရန်သို့မဟုတ်မြန်မြန်သွားရန်ဖိအားမပေးပါနှင့်!
MBT enduro စက်ဘီးအကြောင်းမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
အ enduro စက်ဘီး ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ကျယ် ၀ န်းသောရပ်ဆိုင်းမှုခရီးစဉ်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာရှေ့ဘီးများ၏သက်ရောက်မှုများကို ၁၆၀ မီလီမီတာမှ ၁၈၀ မီလီမီတာကြားကိုစုပ်ယူရန်တာဝန်ရှိသောဘားများရှိသည်။ ဤစက်ဘီးအမျိုးအစားတွင်ဘီးများနှင့်လုံးချောများပါ ၀ င်သည့်အပြင်သင့်အနေဖြင့်ရွေ့လျားနေသောကုန်းနှီးကိုထိန်းညှိနိုင်သည့်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့်ထိုင်ခုံကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
အ enduro စက်ဘီး ၎င်းတို့သည်တောင်တန်းများ၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အမျိုးမျိုးအတွက်တောင်သွားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ နေစဉ် ကုန်းဆင်းစက်ဘီး၎င်းတို့သည်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးရှည်လျားသောမြစ်များအတွက်သာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
enduro circuit ဆိုတာဘာလဲ။
enduro circuit တွင်အချိန်အပိုင်းအခြားများပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါမြင့်တက်, သူတို့ကိုလင့်များဟုခေါ်ကြသည်နှင့်အဆင်းတွင်သူတို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအချိန်အတွက်အောင်မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအထူးအဆင့်များသည်ခက်ခဲသောမြေအနေအထားအခြေအနေများရှိပြီးမြင်းစီးသူရဲများသည်တစ်ကြိမ်တည်းတွင်လေ့ကျင့်ရန်အခွင့်အလမ်းသာရှိပြီးထိုပြိုင်ပွဲတွင်၎င်းတို့အားအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုသတ်မှတ်ရန်မည်သည့်လိုင်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ အားကစားသမားများသည်ဤစမ်းသပ်မှုများမှမတူဘဲခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေကောင်းမွန်ရမည် ကုန်းဆင်းတွင်၎င်းတို့သည် ၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်မကြာပါ၊ များသောအားဖြင့်မိနစ် ၆၀ ခန့်ကြာသည်၊ ၎င်းတို့သည်ပြိုင်ပွဲတစ်နေ့လုံးပျံ့နှံ့သွားသည်။
စပိန်မှာအကျော်ကြားဆုံး Enduro ပြိုင်ပွဲတွေကဘာတွေလဲ။
စပိန် Enduro ပွင့်လင်း
Catalan Enduro ဖလား
စပိန် Enduro ချန်ပီယံ